၁၉၆၂ ခု၊ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီး တက္ကသိုလ်အက်ဥပဒေ နဲ့ကောင်စီကိုဖျက်သိမ်း ပညာသင်ကျောင်း အားလုံးပြည်သူပိုင်သိမ်း | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ အဲဒီလောက်ကို ကြောက်နေရင် နိုင်ငံရေးကနေ အနားယူသင့်ပြီ
ကိုလှဆွေ ရေးထားသမျှထဲမှာ အရူးဆယ်ခွန်းပြော အခွန်းတရာမကတော့ဘူးမှန်လို့ »
၁၉၆၂ ခု၊ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီး တက္ကသိုလ်အက်ဥပဒေ နဲ့ကောင်စီကိုဖျက်သိမ်း ပညာသင်ကျောင်း အားလုံးပြည်သူပိုင်သိမ်း
၁၉၅၅ ခု၊ ဥပစာ (ခ) တန်းအောင် B. Sc (Engg) ပထမနှစ် ဖြစ်လာတယ်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဟာ အစိုးရလက်အောက်ခံမဟုတ်ဘူး၊ အလွှာအသီးသီးက ကိုယ်စားလှယ်တွေ ပါဝင်တဲ့ ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ပြီး၊ ပါမောက္ခတွေ ပါဝင်တဲ့ဆီးနိပ်အဖွဲ့က ပညာရေးကိစ္စကိုကိုင်တယ်။
ကျောင်းသားတွေထဲရော ဆရာတွေထဲမှာပါ လူမျိုးစုံ ဘာသာစုံ။
MBBS ဘွဲ့ရရင် နိုင်ငံခြားမှာ ဆရာဝန်သွားလုပ်လို့ရတယ်။
အင်္ဂလန်တို့ အမေရိကန်တို့ကို ပညာသင်သွားတဲ့အခါ ၀င်ခွင့်မဖြေရဘဲ ဆက်သင်ခွင့်ရတာကိုကြည့် ပညာရေးအဆင့်အတန်း။
၁၉၆၂ ခု၊ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီး တက္ကသိုလ်အက်ဥပဒေ နဲ့ကောင်စီကိုဖျက်သိမ်း၊ အမျိုးသားကျောင်း၊ သာသနာပြုကျောင်း။ အလွတ်ပညာသင်ကျောင်း အားလုံးပြည်သူပိုင်သိမ်း၊ သင်ရိုးးညွှန်းတမ်းတွေပြင် စသဖြင့်ထင်ရာလုပ်ရာကနေ ခြောက်ထဲဘက်စုံ ထိုးဆင်းတဲ့ထဲ ပညာရေးလည်းပါသွားတာပါ။
ထင်ရာလုပ်တဲ့အပြင် အပေါစားဖြစ်အောင် ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်တာ၊
ကျနော်တို့ခေတ်က ပါမောက္ခဆိုတာ လက်ချိုးရေလို့ရ၊ အဲဒီထဲ Ph D ဘွဲ့ရသူရှားမှရှား၊ ခုတော့ ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ တက္ကသိုလ်၊ လမ်းတိုင်းမှာ ပါမောက္ခ၊ လူတိုင်းက Ph D ဘွဲ့ရ။
ပညာရေးဆိုတာက မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဘာသာရပ်ကို ရွေးချယ်သင်ယူခွင့်ရှိပြီး ယဉ်ကျေးတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ အမြင်ကျယ် အမြော်အမြင်ရှိသူတွေ အနေနဲ့ပါဝင်လာဖို့ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလိုပညာတတ်တွေနဲ့သာ တိုင်းပြည်ရဲ့အဆင့်ကိုမြှင့်တင်နိုင်မယ်မဟုတ်ပါလား ?
အဲဒီလိုပညာရေးစနစ်ရှိဖို့ ဆိုတာ အရည်အချင်းပြည့်မီတဲ့ အစိုးရလိုတယ်။ ဘက်မလိုက်တဲ့ တရားဥပဒေ ကျင့်သုံးရမယ်။ ပိုင်ရှင်အလိုကျ မဟုတ်ဘဲ အယ်ဒီတာများ လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်ရေးသား ခွင့်ရှိတဲ့သတင်းစာတွေ မရှိလို့မဖြစ်။
တခြားလူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့များနည်းတူ ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေလည်း ရှိကိုရှိရမှာမို့ ရန်သူလို့မြင်ဖို့မသင့်။ ကျနော်တို့ခေတ်က တကသ ကိုယ်စားလှယ် တက္ကသိုလ်ကောင်စီထဲ ပါဝင်တာကိုကြည့်။
ယနေ့ပညာရေးပြဿနာဟာ စစ်အာဏာရှင်ဆိုတဲ့ ကင်ဆာရောဂါရဲ့ ဘေးထွက်လက္ခဏာမို့ ပင်ရင်းကိုကြည့်ရမယ်၊ မျက်စိတဆုံး အမြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ ကြည့်ရမယ်၊ ဆေးမီးတိုနဲ့ကုလို့မရ၊ ရေမန်းကိုအားကိုးလို့မဖြစ်။ သို့သော် အနာသိရင်ဆေးရှိ ဆိုသလို ဘယ်လိုကင်ဆာရောဂါမဆို ပျောက်အောင်ကုလို့ရနေပြီဆိုတာလည်း မမေ့ဖို့ ရေးလိုက်ရကြောင်းပါ။
၂၀၁၅ ခု၊မတ်လ ၅ ရက်နေ့။
credit; @Winmaung Gyi
This entry was posted on March 5, 2015 at 3:17 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.